Inkcazelo ngokukhawuleza yeRobot
Imbali kunye neNkcubeko Izinto eziBalulekileyo
Ingaba inzululwazi yinto eyenzeka ngayo inzululwazi kunye neerobhothi kunye ne-robotics.
I-robot inokuchazwa njengesixhobo esicwangcisiweyo, esizilawulayo esinezixhobo zombane, zombane okanye zombane. Ngokuqhelekileyo, ngumatshini osebenza kwindawo yendawo ephilayo. IiRobhothi zinqweneleka ngokukhethekileyo kwimisebenzi ethile yemisebenzi kuba, ngokungafani nabantu, abaze bathathele; banokukwazi ukunyamezela izimo ezingekho phantsi okanye eziyingozi; banokusebenza kwiimeko ezingenamoya; ababukiyo ngokuphindaphinda, kwaye abanakuphazamiseka emsebenzini owenzileyo.
Umxholo weerobhothi undala kakhulu kodwa i-robot yegama eliye laqalwa ngekhulu lama-20 ukusuka kwiCzechoslovakian igama elithi robota okanye i-robotnik lithetha ikhoboka, umkhonzi, okanye umsebenzi onyanzelekileyo. IiRobhothi akufuneki zibuke okanye zenze njengabantu kodwa zifuna ukuguquguquka ukuze zenze imisebenzi eyahlukileyo.
Iiprobhothi zasekuqaleni zamashishini zisebenzise izinto ezichithwa ngama-radioactive kwiilabhu ze-athomu kwaye zabizwa ngokuba yi-master / slave manipulators. Badibaniswe kunye nokuxhunyaniswa kwemishini kunye nezixhobo zensimbi. I-manipulators yangengalo ekude ingashukunyiswa yimibhobho, iitshintshi okanye iinjabulo.
Iiprobhothi zamanje ziye zaqhuba iinkqubo zengqondo ezenza ulwazi kwaye zibonakala zisebenza njengokuba zinesibindi. "Ingqondo" yabo ngokwenene ifom yeengcinga zekhompyutha (AI). I-A ivumela i-robot ukuba ibone imeko kunye nokugqiba kwinqanaba lezenzo ezisekelwe kuloo miqathango.
I-robot ingabandakanya nayiphi na into elandelayo:
abaqhubi - "iingalo", "imilenze", "izandla", "iinyawo"
iinzwa - iinxalenye ezenza njengengqondo kwaye ziyakwazi ukubona izinto okanye izinto ezifana nokushisa nokukhanya nokuguqula ulwazi lwezinto zibe ziimpawu ukuba iikhomputha ziyaziqonda
ikhompyutha - ingqondo equlethe imiyalelo ebizwa ngokuba yi-algorithms yokulawula i-robot
izixhobo - oku kubandakanya izixhobo kunye nezixhobo zokusebenza
Iimpawu ezenza iirobhothi ezahlukileyo kumatshini aqhelekileyo kukuba iirobhothi zisebenza ngokuzimela ngokwazo, ziyakhathalela imeko yazo, zilungelelanise ukutshintsha kwimo engqongileyo okanye iimpazamo ekusebenzeni kwangaphambili, zijoliswe kumsebenzi kwaye zihlala zikwazi ukuzama iindlela ezahlukeneyo ukufezekisa msebenzi.
Iirobhothi eziqhelekileyo zorhwebo ziqhelekileyo zixhobo ezinzima ezincinci kwimveliso. Basebenza kwiindawo ezichanekileyo kwaye benza imisebenzi ephindaphindiweyo ephindaphindiweyo phantsi kokulawulwa kwangaphambili. Kwakukho iirobhothi ezi-720,000 zorhwebo kwi-1998. Iiprobhothi eziqhutyelwa ngetekisi zisetyenziselwa kwimihlaba ehleliweyo efana ne-undersea kunye nezixhobo zenukliya. Benza imisebenzi engeyiyo yokuphindaphinda kwaye banqande ukulawula ixesha loqobo.
Imbali yeeVending Machines
Imbali ye-Wheel Water
Inyaniso Eminye Imveliso Eyaziwayo
Bingo: Imbali yoMdlalo
Imbali kaKevlar - uStephanie Kwolek
Imbali yeeNdlu zeeFowuni
I-Plastic Architecture - Ukwakha i-Biodome
UReginald Fessenden kunye noSasazo sokuSasazwa kweRadio
Imbali yeCelsius Scale
Imbali yeScuba Diving
Yongeza iMemori yeMemori yokuKhathalela kwiWebhsayithi yakho
Imfazwe yaseKorea: USS Valley Forge (CV-45)
I-Crystals: I-World Grittiest Girl Group
Igama 3 ama-Disaccharides
Iintlanu zeDhyani Buddha
Iingoma zeScotty McCreery - I-American Idol yeSikhokelo ye-10
Umda ukususela ngo-1880 ukuya ku-1890
Yintoni iClass Social, kwaye Kutheni Kubalulekile?
Iindlela eziSiseko zeMibutho engekho yoRhulumente
Iikhuphethi: I-Shaft ngokumalunga neCandelo leDrayivu
IYunivesithi yaseCalifornia eSanta Barbara (UCSB)
Indlela Yokuvakalisa Amagama aseNtaliyane
Idatha ye-Admissions yeekholeji yase-Wheaton
Imilinganiselo yemvelo yokungasebenzi
I-Biography kunye neProfayili kaChuck Liddell
I-Top 10 yeengoma ze-Taylor Swift Zonke zexesha
Yintoni Eyenzekayo "Ukuthatha Okwenziwe Ngayo okanye Akukho Msebenzi?"
Imbali yeGalati & Izixhobo zeGalofu
Ngubani owamisa igama elithi 'Ithenda elineshumi'?